MINI-COWS: WAKIILLADA UGU YAR (CüCH) EE ARTIODACTYLS EE ADDUUNKA - XOOLAHA
Kalluunka ugu yar ee aduunka
Caanuhu ma aha oo kaliya ballaaran, laakiin sidoo kale macquul ah. Cambaarta caanahan waxaa loo isticmaalaa taranka xoolaha ee xayawaanka yaryar iyo xayawaanka la xariira, sidoo kale waxay dalbanayaan xayawaanka noolaha ah. Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa caanaha caanka ah ee lo'da, cidhiidhiga ugu weyn ee xoolaha iyo sababaha astaamaha hoose ee waddamada post-Soviet.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya lo'da cows
Inta badan xubnihii yaryar ee caanuhu way kala duwan yihiin kuwa ay ka mid yihiin kuwa waaweyn, miisaanka iyo wax soo saarka. Markii ugu horraysay, taranka lo'da ee nacaybka ayaa lagu dhaqmaa Hindiya, tan iyo markaasna tirada noocyada noocyada noocan ah ayaa koray ilaa 30. Celceliska dhererka xayawaanka xayawaanka ah ee ku jira miyirku waa 90 cm, miisaanka - min 80 illaa 200 kg. Marka la barbardhigo, qaansiirta qaangaarka ah ee waaweyn ee miisaanka weyn ee miisaankiisu yahay 700-800 kg oo qoyaan ah ayaa gaaraya 1.5 m. Hal lo'dood ah, oo ku xiran caleemaha, waxay soo saari kartaa 3 ilaa 8 litir oo caano ah maalin kasta waxayna soo saartaa isla sannadkii hal mar. Celceliska wax soo saarka xayawaanka caadiga ah waa 23 litir oo caano ah maalintii.
Waa muhiim! Gabadha ciriiriga ku jirta oo leh ragga waaweyn waxay u horseedi doontaa xaqiiqda ah in gabadhu aanay awoodin inay degto sababtoo ah cabbirka xad-dhaafka ah ee ilmaha caloosha ku jira. Isku-tallaabidda qadar-yar-yar ayaa la sameyn karaa oo kaliya gudaha gudaha ama inta u dhaxaysa cayayaanka isku midka ah.
Tixgeli kuwa ugu caansan ee dhowr daraasadood oo jira.
Tani waxay ahayd mid la yiraahdo Scotland bilowgii qarnigii XIX, oo tan iyo markii uu helay sumcad weyn. Qulqulatooyinka waxaa loo dhoofiyaa dalal badan oo adduunka ah, waxaana loo isticmaalaa iskudhafka caanaha caanaha leh si ay u siiyaan caabuq qabow. Dhul-beereedyada waa adag yihiin, waxay leeyihiin nooc cufan oo dastuuri ah, waxaana lagu kala saaraa timo dhaadheer oo casaan ah oo casaan, madow, bunni ama midab leh. Waxay si fudud u maareyn karaan iyadoon xabbadoodu xitaa xilliga qabowga. Kuwani waa lo'da caafimaad qaba oo aan qabin cunto, sida xaaladaha dabiiciga ah ay ku quudiyaan daaqa. Maalin walba waxay ku jirtaa 3 litir oo caano ah.
Ma taqaanaa? Markii ugu horeysay ee heer gobol ah, taranka lo'da ee nacasku wuxuu ku hawlanaa Hindiya. Waxay dhacday 60sii qarnigii la soo dhaafay. Ka dib labaatan sano oo ah taranta guusha, dawlada Hindiya ayaa dalbatay in beeralayda ay kordhiyaan wax soo saarka, iyo isgoysyada "curyaanka" lo'da waxay ku dhowaadba ka soo saartay dadaal kasta. Kaliya sannadkii 1989, barnaamijka dawlad-goboleedka ee ilaalinta caleemaha dwarf ee asaliga ah ee lo'da ayaa la bilaabay, taas oo ay ugu wacan tahay hadda jira labaatan nooc oo xayawaankan cajiib ah ee Hindiya.
Kala duwanaanshahan waxaa si gaar ah loogu qadariyaa hilibkiisa cuntooyinka sarreeya. Qaan-celinta jirka iyo qaan-gooyaha dambe ayaa waxay gacan ka geystaan ​​dhismaha degdegga ah ee maskaxda, sidaas darteed, horeba da'da laba jir, qashinka iyo lo'da sarreeya waxaa loo iibiyaa hilibka. Celceliska miisaanka qaangaarka qaangaarka ah waa 700 kg, iyo lo'da - 450 kg. Dhulalka Qorraxdu waxay u baahan yihiin meelo waaweyn oo daaqa ah, ma cunaan cunnooyinka. Waayeelkooda noloshooda waa 25 sano, laakiin xayawaanka xaaladaha warshadaha waxaa ku jira ugu badnaan ilaa 10.
Baro naftaada qaababka taranka iyo ilaalinta lo'daada dwarf.
Waxaa loo tixgeliyaa sida ugu yar ee lo'da ee adduunka. Waxay leedahay asal ahaan Hindiya, waxaa loo magacaabay sharaf magaalo qarsoodi ah, oo u dhow beertii xoolaha.
Iyadoo kororka qiyaastii ilaa 80 cm culeyskiisu yahay 90 kg. Lo'da xoolaha vechur waa xayawaan xayawaan leh oo daan dimoqraadi ah. Waxay leeyihiin caanaha ugu sarreeya ee ku saabsan miisaanka jirka, maaddaama ay ka helaan 4 litir oo caano ah oo dufan badan maalintii. Caloosha caanahaan waxaa lagu kala saaraa difaac adag, sidaa daraadeed, heerka sicirka dhimashada da'doodu ka weyn tahay kama badna 1%.
Waa muhiim! Markaad dibedda ka soo baxdo lo'da yaryar, waxaad u baahan tahay inaad xasuusato waqtiyada karantiilka iyo cudurada faafa ee soo noqnoqda ee lo'da. Waxay noqon kartaa mid aad ufiican oo lagala xaajoon karo helitaanka xayawaan yar oo ku saabsan beeraha taranta gudaha. U hubso inaad eegto dukumiintiga taranta ee lo'da, si aanay u helin shakhsi ku habboon cilad naadir ah iyada oo loo eegayo xoolaha yaryar.
Qaybaha hoose ee xoolaha duurjoogta ah. Xayawaankani waxay si fiican u habboon yihiin kuleylka kuleylka ah iyo qoyan, hase yeeshee waligood si nidaamsan uma aysan soo bixin. Waxay leeyihiin nooc dareen ah oo dareen ah, waxay si tartiib-tartiib ah ku darsadeen. Heerka dhererka dhagaxu waa 90 cm, miisaankana waa 80 kg. Muuqaalka muuqaalka ah ee dhagaxu waa bacaha iyo bacaha dufanka leh ee qaabka burqada iyo lakabyada jilibka ee jilibka. Soosaarka caanaha ee Zebu waa mid hooseeya ilaa 2.5 litir oo caano ah maalintii, hilibka ayaa leh dhadhan qoyan.
Akhriso waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan roodhida roodhida ee Samu-ga.
Dad badan oo Afrikaan ah iyo dadka Madagaskar waxay ka dhigaan xayawaanka inay noqdaan xayawaan xayawaan ah, laakiin hilibkooda ayaa wali la cunaa.
Xayawaankani waxay isku midka yihiin caruusadaha jilicsan sababtoo ah timo aan caadi ahayn iyo mid gaaban. Sida rasmiga ah, ma jiro nooc jilicsan, xayawaanka sida mar walba lagu calaamadeeyo iskutallaab. Cawska lagu riixay waxaa laga helay Maraykanka waxaana loogu talagalay inay ka qaybqaataan bandhigyada.
Ma taqaanaa? Qiimaha qaaliga ah ee ugu qaalisan waxaa loo tixgeliyaa in uu jilicsan yahay ama lo'da cuncun leh, sida loogu yeero. Qiimaha qiimaha ee qaangaarka ah wuxuu u dhexeeyaa 7-10 kun oo doolar, qiimaha xoolaha oo si gaar ah qiimo u leh 30,000, iyo mararka qaarkood xitaa 40,000 oo dollar.
Waxay ka duwan yihiin xayawaanka kale ee curyaanka ah ee yar yar, candho xoolo ah oo aan ku habooneyn caano iyo maqnaanshaha dhammaystiran ee geesaha. Dastuurka qashin-saarku waa mid dabacsan, jilicsan, iyo dhogorta ayaa u baahan daryeel joogto ah. Way adagtahay in la yiraahdo lo'dooyinkan oo kale sida muraayada, tan iyo markii ay miisaankoodu gaaro 130 cm oo miisaankoodu ka badan yahay nus tan.
Xayawaanka noocyadaasi waxay leeyihiin xididada caadiga ah ee dhagaxa, laakiin, waxaa badanaa loo qaybiyaa Jamhuuriyadda Sakha.
Waxaan kugula talineynaa inaad tixgelisid sifooyinka dabeecadda ee Yakut mini-lo'da.
Waxay yihiin lo'da aboriginal, oo loo isticmaalo marinka Jersey iyo jilicsanaanta si loo hagaajiyo tayada wax soo saarka ee dambe. Hilibka iyo caanaha xayawaankani waa mid aan caadi ahayn nafaqo. Iyada oo celcelis ahaan caanaha caanaha maalinlaha ah ee 5-6 litir, caanuhu waxay leeyihiin walxo baruur ah illaa 11% marka la barbardhigo 3% naasaha waaweyn. Cawsku wuxuu u dulqaadanayaa heerkulka aan fiicnayn, lana rarro qolalka xataa at -30 ° C. In nafaqada, waxay yihiin aan qabyo ahayn, thanks to hunguriglaha, haddii loo baahdo, waxay ku dheefshi karaan xitaa laamihii hore iyo jilif ee geedaha. Iyadoo kor loogu kiciyo mitir geedka, dadka waaweyni waxay miisaamaan celcelis ahaan 200 kg.
Waa muhiim! Iyada oo qayb ka ah beerta xoolaha, waxay noqon doontaa mid aad u ballanqaad badan oo aan iibineynin abuurka cusub ee la soo saaray, laakiin in xoolaha la geeyo ugu yaraan shan halbeeg iyo in ay ku lug yeeshaan taranka taranka. Daaqsiinta shimbiraha ayaa sahlanaan doonta in la eego baahida xoolaha.
Sababta caleemaha cirifka ah kuma caan baxaan Ruushka iyo dalalka ku dhow Dibadda
Sababta ugu weyn ee dadka ugu hooseeya waa qiimaha sarreeya. Cows dhalada ah ayaa lagu qiimeeyaa badanaa badanaa qaraabada ugu weyn. Ma aha in beeraley kastaa awood u yeeshaan inay iibsadaan xoolo xaraash ah qiimaha xoolaha. Dad badani waxay sidoo kale u baahan yihiin xaalado gaar ah. Qaarkood waxay ku habboon yihiin cimilada qaboobaha, kuwa kalena waxay u baahan yihiin qoyaan joogto ah iyo heerkul sare. Abuurista xaaladuhu waxay qaadataa kharash dheeraad ah. Dhibaatada ka jirta dibedda laga keeno dibadda iyo kharashka dheeraadka ah ee aan qiimaha lahayn ayaa ka careysiiya beeraleyda oo joojiya taranta cayayaanka lo'da ee ku nool Ruushka iyo waddamada deriska ah.
Ma taqaanaa? Caanaha ugu da'da weyn ee lo'da waa lo'da Highland lo'da. Xayawaanka lo'du waxay ku tuntay Dhulka Woqooyi ee Woqooyi, laga bilaabo qarnigii XII. Dhamaadkii qarnigii 18aad, waxay abaabuleen taranta dhul-beereedka, taas oo keentay in la jaangooyo xoolaha sida sifooyinka midabka iyo muraayada.
Qaar ka mid ah caleemaha curyaanka ah ee lo'da ayaa lagu xakameeyay xulasho dheer, qaarna waxay ku gudbeen xulashada dabiiciga ah waxayna xajisteen xuduudaha mugdiga ah ee badbaadada ka sii wanaagsan. Xayawaannada saafiga ah waxaa lagu kala soocaa aan qabyo ahayn, caafimaad wanaagsan iyo wax soo saarka gaar ahaaneed, taas oo lagu muujinayo heerka dufanka badan ee caanaha ama korodhka degdegga ah ee miisaanka nool. Iyada oo ay ku haboon tahay daryeelka, qaansiirka yaryar ayaa ku farxi doona milkiilaha noloshiisa dheer iyo dabeecad wax ku ool ah.
Galab wanaagsan Waxaan haysannaa dhowr lo'da midhaha. Kulaylku si wanaagsan ayuu u dulqaadan yahay, inkastoo ay leeyihiin hoos hoos ee hooska. Caanaha iyo xaqiiqda ah baruurta iyo dhadhan fiican. Ma dhacdo wakhti aad u dheer, haddii ay si buuxda u caano Waxaan ku dhaqnaa candho xoolo leh biyo nadiif ah ka hor intaanad wax cabin oo tirtirin qalalan. Caanuhu wuxuu istaagaa iyada oo aan qaboojiye lahayn oo uusan kaadin karin wax ka badan hal maalin kuleylka (39 digrii)! Dhawaan, caanaha lakala jeexay jiiska waxaa lagu hayaa diirimaad ilaa 5 cisho illaa iyo markii la kariyey iyo, geeddi-socodka, dhirta ayaa sidoo kale lagu shubay caanaha. Dhakhaatiirtayada ayaa sheegaya in ay tahay caano aad u qiimo badan, waxaana ku jira qadar aad u qiimo badan oo qiimo leh, iyada oo lagu tuhunsan yahay tayadiisa. Cows iyo runta waa mid naxariis badan, kalgacal, dhib la'aan, ttt. Waxaan ku jirnaa LO.